Textile engineering မိတ်ဆက်
Thread: Textile engineering မိတ်ဆက်
07-02-2008 06:22 PM #1
Thanked 1,715 Times in 396 Posts
Textile engineering ဆိုတာ ဖိုင်ဘာတွေ ချည်မျှင်တွေ နဲ့ အခြားအကျုံးဝင်သော processes, products, machinery တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပံ္ပဆိုင်ရာ..အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ သဘောတရား, ဒီဇိုင်း, ထိန်းချုပ်မှု , research တွေကို လေ့လာတဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်..သဘာဝအလျောက်ရှိနေတဲ့တာတွေရော လူလုပ်တာတွေရောပါဝင်နိုင်ပါတယ်..
အများအားဖြင့် textile engineer တွေ လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တွေကတော့ ..
Engineering Systems, Textile Engineering Design, Mechanics of Fibrous Structures, Textile Engineering Quality Improvement, Textile Information Systems Design, Polymer Engineering, Polymeric Biomaterials Engineering, Mechanics of Tissues &amp; Implants Requirements, Fabric Building Mechanisms, Special Topics in Textile Engineering, Dynamics of Fabric Production Systems, Textile Composites, Polymeric Biomaterials Engineering, Industrial Textiles, Textile Applications in Medicine, Engineering Economics, Basic Electronics of Textile Manufacturing and Quality Testing Machinery, Dyeing, Printing and other methods of textile coloration, and Industrial Planning.
Throughout the Textile Engineering curriculum, students take classes from other engineering and disciplines including: Mechanical, Chemical, Materials and Industrial Engineering Disciplines. The TE curriculum providesabroad base of fundamental engineering courses asafoundation for studies in textile engineering. Students also learn such fundamental courses as Thermodynamics, Materials Science, Industrial Management, Applied Mechanics, and Engineering Drawing and Design.
No Friends, No Keep in Touch! No Keep in Touch, No Disscussions! No Disscussions, No Forum! No Forum, No MEF!
The Following3Users Say Thank You to yeakharr For This Useful Post:
William Paul, wlk3649, ကိုထွန်း
10-21-2008 06:45 PM #2
ပြန်စာ -> Textile engineering မိတ်ဆက်
ဆက်ရေးပါဦးဗျာ။ ဒီကဏ္ဍလေးမှာ ဘယ်သူမှလည်း ဆက်မရေးလို့ပါ။
ဖိုရမ်မှာနေရာပုပ်မှာတော့ စိုးရိမ်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးချက်ကို ကျွန်တော် ၂ ပတ်လောက်နေ၇င်ပြန်ဖြုတ်ပါမယ်။
ခုတော့ အကြံပေးချင်လို့ ရေးလိုက်တာပါ။
ကိုနေပြောတဲ့ ဖိုရမ်နေရာတွေ အလဟသဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလဲ ထောက်ခံပါတယ်။
နေ : ဖြုတ်စရာမလိုပါဘူးဗျ ... ဘာဖြစ်လဲ ... ခင်ဗျားက အလွန်အကျွံ လုပ်နေတာမှမဟုတ်ပဲ ....
ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီအချစ်နဲ့နောက်ဘ၀ ဖြစ်ပါရစေ ဟေမာန်။
The Following User Says Thank You to dr.pwlinn For This Useful Post:
10-23-2008 05:49 PM #3
စနိုးတာဝါ လုပ်တဲ့ ပိတ်အမျိုးအစားကိုသိချင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ... အဲဒီပိတ်ကိုချေးချွတ်၇သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။
နောက် နူးညံ့တဲ့ စနိုးတာဝါဖြစ်ဖို့ အမွှေးဖွရသေးတယ်လို့ ကြာဖူးပါတယ်။
အမွှေးနံ့ကကော ကြာရှည်ခံအောင် ဘယ်လိုဖော်စပ်ပါလဲ။
The Following2Users Say Thank You to dr.pwlinn For This Useful Post:
10-24-2008 05:01 PM #4
ကိုရေခါးရေ စတင်ရေးတာအရမ်းကောင်းပါတယ်နော်။ ကျနော်တော့ စိတ်ဝင်စားတာလေးကိုပဲမေးတော့မယ်နော်။ တကယ်သိချင်နေပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်က nuclear ဖြစ်လေတော့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကာကွယ်ရေးမယ်ဝတ်တဲ့ Apron (ခဲအင်္ကျီ) ပြုလုပ်ပုံလေး ကိုအသေးစိတ်သိချင်နေပါတယ်။ ခဲ့ပါဝင်မှု percentage ကတော့ အထူကိုလိုက်ပြီးတော့ ကွာကောင်းကွာမယ်နော်။ သေချာလေးသိချင်နေပါတယ်။ ကိုရေခါး ကူညီနိုင်ရင်တော့ ကူညီပေးပါဗျာ။
10-30-2008 10:56 AM #5
Myittha, Kyaukse district, Mandalay division
[quote author=dr.pwlinn link=topic=677.msg9460#msg9460 date=1224760762]
[/quote]hi ko ko toe, I am aungzawminthein,BEtextile student in TUkse.I shared you about the process of snowtowel making, that is my knowledge, 1st the fibre used for snowtowel is mostly cotton and linen but cotton has cooling capacity is high and linen is more high.Yes ,all of textile woven fabric are using bleaching process(a phyu chyut chin)for white clothes.
If I devalue you, I devalue myself.
The Following User Says Thank You to textileengineer For This Useful Post:
09-28-2009 12:11 PM #6
Textile Engineering နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ရနိုင်ရင် တင်ပေးပါခင်ဗျာ။ အထူးသဖြင့် Knitting, Wrapping နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပါ။ Fabric Design အကြောင်းလဲ လိုချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
The Following2Users Say Thank You to agzaya For This Useful Post:
Kyaung Sayar, ကိုထွန်း
05-01-2010 10:00 PM #7
ပြန်စာ -> ပြန်စာ -> Textile engineering မိတ်ဆက်
[quote author=Dr.ဖြိုးဝေလင်း link=topic=677.msg9460#msg9460 date=1224760762]
ကိုဖြိုးဝေလင်းရေ ကျွန်တော်ကတော့ Textile engineer လဲမဟုတ်ပါဘူး ။ မည်သည့် engineer မှလဲမဟုတ်ပါဘူး
ဖိုရမ်မှာဖြေပေးမယ့်သူမတွေသေးတာကြောင့် ကျွန်တော်သိတာလေးကို ၀င်ရောက်ရေးသားပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ( အမှားအယွင်းပါလျှင်ခွင့်လွှတ်ပါရန်)
စက်ရက်ကန်းစင်မှာ အတိုင်အဖြစ် ပေါလီအက်စတာ (polyester) ဓာတုနည်းဖြင့်ပြုလုပ်သောချည်မျှင်
အဖေါက်အဖြစ် အပ်ချည်( cotton) ၀ါမှပြုလုပ်သောချည်မျှင်
အတိုင်ချည် polyester ချည်မျှင်နံပါတ် 40 အား တစ်လက်မလျှင် (52) ပင်နုန်းဖြစ် ယင်သွားခေါ် ချည်မျှင်ထိန်း ကိရိယာတွင်ထည်သွင်းပြိး
အဖောက်ချည် cotton ချည်မျှင်နံပါတ် 1/16 အား တစ်လက်မလျှင် 24 ကြိမ်နုန်းဖြစ် ရက်လုပ် လျှင်ရရှိသည့် ပိတ်မှာ စနိုးတာဝါအဖြစ် အသုံးပြု၍
ရရှိပါသည်။ (ပိတ်အမျိုးအစားကတော့ မြန်မာအခေါ စနိးတာဝါပ်ိတ်လို့ ပင်ခေါဆိုကြပါသည်။)
ရိုးရိုးစက်ယက်ကန်း (သို့) နိင်လွန် ချည်မျှင်ရက်လုပ်သော စက်ယက်ကန်း တို့ဖြစ်ရက်လုပ်လျှင်လည်းရ နိုင်ပါသည်။
နိုင်လွန် ချည်မျှင်ရက်လုပ်သော ရက်ကန်းစက်အမျိုးအစားက ပိုမို၍ ကောင်းသည်ဟုဆိုပါသည်။
ထို့ အပြင် --ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်သုတ် (သဘက်) များကိုရက်လုပ်သော စက်များဖြစ်လည်းရက်လုပ်လျှင်ရပါသည်.။ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။(အမွှေးဖွရန်မလိုသောစက်)
ရိုးရိုးစက်ယက်ကန်းဖြင့်ရက်လုပ်ထားသော စနိးတာဝါပိတ်စကို ပထမဆုံး အမွှေးဖွရပါသည်။
ထိုအမွှေးဖွပြိးသော ပိတ်စအား လိုအပ်သော အပိုင်းအစ (စနိုးတာဝါ အရွယ်အစား အလျား ၉ လက်မ အနံ ၉ လက်မ) ဖြစ်အောင်
အမွှေးဖွနည်းမှာ --သာမန် ဆူးလိပ်ပတ် roller (ဒလိမ့်လုံး) နှစ်ခုကြား တွင် ထို စနိုးတာဝါပိတ်စအားထိုးသွင်း၍ အမွှေးဖွ နိုင်ပါသည်။
နောက်တစ်နည်းမှာ အပ်ချောင်းအများအပြားဖြင့်လည်း ထိုးစွ၍ အမွှေးဖွ နိုင်ပါသည်။
အမွှေးဖွပြိးသော စနိုးတာဝါကို ချေးချွတ်ရပါသည်။ bleaching powder (ခေါ) အထည်ချေးချွတ်ရာတွင်အသုံးပြုသော ဓါတုပစ္စည်း ဖြင့်
အမွေှ့းနံသာကတော့ -ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အနံ (အမွှေးနံသာအဆီ)ဖြင့် ထည့်ပေါင်းရပါသည်။
The Following5Users Say Thank You to Time0 For This Useful Post:
gtone, Kyaung Sayar, pyaesoneaung, William Paul, ကိုထွန်း
10-14-2013 12:43 AM #8
ချည်အရောင်ဆိုးတဲ့ နည်းပညာလေးတွေနဲ့ ဆိုးဆေး ဆိုးပုံဆိုးနည်း၊ ဆိုးဆေးသုံးစွဲပုံ သုံးစွဲနည်း၊ ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်များကို လည်း မျှဝေပေးပါဦး ခင်ဗျ....
Quick Navigation ချည်မျှင်နှင့် အထည် အင်ဂျင်နီိယာပညာ Top
Civil Engineering and Tunneling Engineering ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
By johnamh in forum အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
Last Post: 06-08-2011, 12:24 AM
By zephyr in forum ချည်မျှင်နှင့် အထည် အင်ဂျင်နီိယာပညာ
Last Post: 01-20-2009, 11:39 AM
Highway engineering and knowledge of Textile Engineering
By textileengineer in forum ချည်မျှင်နှင့် အထည် အင်ဂျင်နီိယာပညာ
Last Post: 11-07-2008, 10:04 PM
About the Modern method in Textile Engineering
Last Post: 11-01-2008, 08:52 PM
All times are GMT +6.5. The time now is 10:13 PM.